Izinto ezili-15 ezingafanele zenziwe kwiSuku loVavanyo oluSimisiweyo
Usuku loVavanyo oluqhelekileyo Akukho-Nos
Ngomhla wovavanyo! Ulungele oko, kunjalo? Akunjalo ukuba uceba ukwenza naluphi na oku kulandelayo. Ingaba uthabatha i- SAT okanye UMTHETHO ukuba ungene kwi-undergrad, okanye i-LSAT, GRE, okanye i-MCAT ukuba ungene kwisikolo esiphumelele kwisikolo , kukho izinto ezimbalwa ezisekwehlwini "Musa ukwenza" usuku lovavanyo. Ngaba ufuna ukwazi ukuba ziphi? Kakade uyenzayo. Funda kwizinto ezilishumi elinesihlanu ukuba ungenzi usuku lovavanyo.
Ukufunda Kwisihlandlo sokuQala
Cultura / Luc Beziat / Riser / Getty Izithombe
Umhla wokuvavanya awunayo, kwaye ndiphinda ndiphinda ndikhuphe incwadi ye-ol's SAT yokuhlola i-prep okanye ye- ACT ACT app uze uqalise ukuhamba. Unelungelo lokwenza oko iinyanga ezimbalwa ezedlulileyo. Akuyi kukukwenza nanamhlanje namhlanje. Eyona nto ininzi, uya kukhwankqisa xa ungenakulungiswa. Iimvavanyo ezimiselweyo njengeGG , i- LSAT , kunye nowe, ezo vavanyo zokungena kwiikholeji, ziyizona zivavanyo zokuqiqa. Ukufunda isiqulatho kuya kukufumana nje ngoku. Ngeke ukwazi ukuqonda izicwangciso eziyimfuneko ukuvavanya nje ngosuku. Kungcono ukuhamba ungaboni kakuhle kunokuba usongele.
Ukukhwela Kwibhedi 30 Imizuzu Ngaphambi kovavanyo
Mamela. Ukuba imiyalelo yokubhalisa ithi kuwe kwiziko lokuvavanya ngo-8: 00, oko akuthethi ukuba ngo-8: 00 xa ubonisa. Nope. Kuza kubakho imiba yokupaka, ngakumbi xa uthatha uvavanyo olufana neLSAT, ACT , okanye iSAT apho kunemizuzu embalwa yokuvavanya kunyaka. Imigca iya kuba yinde. Iindlu ziya kubanzi. Kwaye oko kukuphela kokungena kwisakhiwo. Kuya kukuthatha ixesha lokufumana igumbi lakho, sebenzisa indlu yokugcina, kwaye uphuze amanzi ngaphambi kokuba uqale. Cwangcisa ukufika okungenani imizuzu engama-30 ukuya kwe-45 phambi kwexesha lakho lokuvavanya ukuze ungashiywa umnyango emnyango ngo-8: 5, uzibuza ukuba kutheni inenekazi enhle emva kweglasi ingakuvumeli.
Gqoka iingubo ezingakhawulezileyo
Getty Images | ULeonard McLane
Ngokuqinisekileyo, ufuna ukujonga i-snazzy yonke yesibini yosuku, kodwa ukuhlolwa kwe-SAT akuvumeli izikhulu zakho ezizithandayo kunye ne-tube top. Okokuqala, awufuni ubukho bakho obuphezulu obukukhathazayo kuyo yonke imvavanyo - unento engcono yokucinga ngayo. Okwesibini, unokutshatyalaliswa kwigumbi lokuvavanya. Awuqinisekanga ukuba uvavanyo lweemeko ngokupheleleyo, kwaye ukuba ucinga ngendlela amazinyo akho athetha ngayo ngokukhawuleza, ngoko ke awugxila kwizinto ezibalulekileyo - ukuba ungadlulisa njani izicatshulwa ezibalulekileyo .
Gqoka iingubo eziduduzayo
Getty Images | URobert Daly
Ngokufanayo, awufuni ukuba ucoceke ngexesha lovavanyo lwakho, nokuba. Ukuba ugqoke i-jammies okanye iimpahla oziqhelekileyo ukuzigqoka xa uphumelela ngokupheleleyo, ke amathuba okuba uya kuziva ulala ebuthongweni ngenxa yobudlelwane. Ubuthongo abufananga nomlinganiselo wokuvavanya.
Gqoka izambatho eziphathekayo kwiziko lovavanyo njengee jeans ezigqwebileyo kunye ne-t-shirt ene-sweatshirt ukuphosa xa imeko ye-air isingqongqo.
Yeka isidlo sakusasa
Umzimba wakho unokwenza i-pit-dive icinga malunga nale mibuzo ye-LSAT Analytical Reasoning, kodwa ukunqumla isidlo sakusasa kuhamba ngokugqithisa ishukela lakho legazi ngaphezulu. Yenzululwazi. UConstance Brown-Riggs, MSEd, RD, CDE, i-CDN, ootitshala ababhalisiweyo kunye nesitifiketi esiqinisekisiweyo sesifo sikashukela, uthi abantu abadla isidlo sakusasa, "bavelisa kakhulu emsebenzini, banobulumko bokuxazulula iingxaki kunye nokucaca kwengqondo." Ukucaca kwengqondo kukukhulu kumhla wovavanyo!
Yidla iTarbage kwi-Breakfast Breakfast
Kulungile, ngoko-ke akuyiyo ingcola yangempela , kodwa ukuba uthe wehla i-Red Bull kunye nekhwama ye-chips ye-corn yefesimini, awuziziphi na izipho, mhlawumbi. Ngokuqinisekileyo, mhlawumbi kungcono ukuba nento ethile kwisisu sakho ngokungafani nanye, kodwa ukunyuka okukhulu kwe-caffeine kunokunokwenzakalisa intsebenzo yakho ekuvavanyeni kwakho ukuba unobuncwane. Ukuba i-caffeine iyimfuneko, bambelele kwikomityana encinci yekhofi okanye itiye. Yeka i swekile. Kwaye esikhundleni se-chips ezicatshulwa kakhulu, ukhethe ukutya okufana namaqanda okanye i-blueberries ukwenzela ukwandisa iinkqubo zakho zengqondo.
Thatha usebenze / P90X / Xtreme ukwehla kwe-skiing
Ewe, ukuzivocavoca ngumxininiso omkhulu wokuxininisa, kodwa uthatha umdlalo omtsha ngokukhawuleza phambi kokuba uvavanyo lwakho kumgudu wokunciphisa ukuphazamiseka ngaphakathi emzimbeni wakho akuyona ndlela efanelekileyo. Ukuba awuzange usebenze ngaphambili, ngoko unokuzilimaza okanye ufumane isisu esicasulayo nakwixesha elifutshane. Ukuba awuzange wenze i-plyometrics ngaphambili, ngoko unokuncedisa i-ligament echithwe kwiikliniki emva kweeyure endaweni yokuphendula umbuzo 17 ngokuchanekileyo kwi-test yakho ye-PSAT. Ukuba ufuna ukukhulula uxinzelelo oluthile, yenza umsebenzi owenziwe ngaphambili. Thatha uhambo. Qalisa ukuba ungumgijimi. Yenza i-P90X yakho ukuba uyenzile okwesikhashana. Kodwa ngenxa yezulu, musa ukubetha idayimnyama elimnyama ukuba unobumba bentaba yomntu. Londoloza loo mhla olandelayo.
Izinto ezingakumbi UKUZE WENZE Usuku Lovavanyo
Umbono we Digital
Nantsi enye uluhlu , kuyo yonke inkazimulo yayo. Ezinye zazo ziya kukumangalela! Kaninzi "
AmaSikh Baby Names ukusuka ku-Z
Imbali Yembali Iingxelo Zephepha - 10 Iingcamango nemizekelo
UFidelio Synopsis - Ibali leBeethoven kunye ne-Opera kuphela
Iinguqu ezahlukeneyo zokuzalwa kukaDionysus
IJazz Ngomnyaka: 1920 - 1930
IPortugal yafumana njani i-Macau?
Kutheni i-My Car Battery ifile?
Isikhokelo sabaQala bee Roulette
USeraphim Iingelosi: Ukuvutha Ngomdla kuThixo
I-Ginkgo Biloba ebalulekileyo